DAAWO:- Maxkamadda Puntland oo lasoo taagay siyaasi lagu eedeeyay inuu aflagaadeeyay Deni iyo Xukuumadiisa. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Previous articleDAAWO:- Siyaasi sheegay in MD Deni uu ku fashilmay Hogaaminta dalka “Deni waa mukhalas u adeega Shisheeye”.
Next articleDAAWO:- “Goorma ayey Al-Shabaab gaareysaa jawaabtii ay dowladdu balan qaaday in ay ka bixinayso qaraxii 14-kii October”
Fanax October 14, 2019 At 9:31 pm
Madaxda Puntland iyo xukuumadda waa la caayi karaa oo la aflagaadeyn karaa oo la cambaareyn karaa maxaa yeelay waxay shaqaale u yihiin shicibka hoggaanka u dhiibtay. Waxaa keli ah oo dacwo lagu qaadi karaa qof ama koox dastuurka iyo sharciga Puntland ku xad gudba. Maahan wax la aqbali karo in shicibka si khaldan sharciga loogu adeegsado oo afka loogu qabto. Dein waxa uu yahay waa laga sheegi waana sax.
Atoore October 14, 2019 At 10:24 pm
KU:fanaxoow War adigaa reer bariga malaha af yaqaane ku dheh war nin intaas jira iskadaaya.War kaas waxuu yiraahdo wax ka soo qaad maleh oo waa nin uu cimrigiisii dhan u batay.
Fanax October 14, 2019 At 11:40 pm
Atoore sxb reer Bari waa is naqaanaa oo deegaano waa ku leenahay sida Caluula. Sxb dhibka jira baa wuxuu yahay in Cismaanku dhexdooda khilaaf ka jiro oo qaar ka mid ah iyo reer Bariga kale ay af garan waayeen siduu Siciid Deni u fikirayo oo u dhaqmaayo. Fara galin far dheeratay oo uu Cabdi Weli Cali Gaas fidnadeeda abuuray baa bariga qasaysa oo saad ogtahay labadan nin iyo jifooyinkooda way isku xirnaayeen oo UAE ayadana hoos bay ka xiran yihiin. Qaabka wax loo wado baa u cuntami la reer bariga oo idil. Fara galinta haddii laga daayo wax walba waa hagaagayaan Atoore.